Kudonha Flip, iko kushanda kwevhiki | IPhone nhau
Vhiki rapfuura zvakare uye kwatove nechimwe chikumbiro chemahara kwemazuva manomwe. Ino nguva, iyo app yevhiki iri Kudonha Flip, mutambo wakandiyeuchidza zvishoma (zvakati wandei) zveumwe wakadaidzwa StringZ, hongu, imwe iine zvirinani zvirinani (uye ini ndingati zvimwe zvakakwana). Icho zvakare chiri chokwadi ndechekuti "pabhiza rechipo hatifanirwe kutarisa (zvakanyanya) pazino rake."
Zvatinofanira kuita muDrop Flip ndeizvi isa bhora mumugomo. Sezvinowanzoitika mumatanho ekutanga emitambo mizhinji, iwo matanho ekutanga eDrop Flip achashanda sedzidziso, yekutanga kuve yakapusa zvekuti isu tinongofanirwa kubata chikuva kuti tivhure uye bhora rinowira rakananga mukasube. Asi, hongu, isu patinofambira mberi, zvichanyanya kuoma kupfuura danho.
Drop Flip ichatinakidza, asi ichatiyeuchidza mimwe mitambo
Kuita kuti zvinhu zvinyanye kuoma, zvinhu zvichakurumidza kutanga kuoneka izvo zvatinofanira kutenderera. Dzimwe nguva zvinongodiwa chete kuvabvisa munzira yedu, asi dzimwe nguva tichafanira kuvashandura (ndinofungidzira kuti ndosaka izwi rekuti "Flip"), ratinofanira kumanikidza zvishoma tichishandisa 3D Touch, uye vamwe isu tichafanirwa kutsigira kana kuvashandisa kuzadzisa chinangwa chedu. Asi usafunge kuti mafungiro ezvinhu zvacho anogara achiratidza nzira kwatiri; dzimwe nguva, semuenzaniso, isu tinofanirwa kubhowa bhora kubva pakona yepuratifomu. Ndokunge, chero zvinotora ku "zvibodzwa."
Sezvo ini ndichigara ndichitaura kana ndichitaura nezvekushandisa kwemahara, ndinofunga chakanakisa ndeche dhawunirodha izvozvi izvo zvave mukusimudzira uyezve sarudza kana tichiisiya ichiiswa kana kuidzima, asi neapp yakabatana neApple ID yedu. Ehezve, kana iwe uchida Drop Flip, ini ndinofunga StringZ ichakufadza iwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Kutengesa » Donhedza Flip, uchiisa bhora mumugomo wako muapp yevhiki
Apple inotangisa kushambadzira yakatsaurirwa kunhabvu chete kuSpain